Raiisel Wasaarihii Holland Mark Rutte oo iska Casilay Xilkiisa Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaRaiisel Wasaarihii Holland Mark Rutte oo iska Casilay Xilkiisa
Raiisel Wasaarihii Holland Mark Rutte oo iska Casilay Xilkiisa
January 16, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Photo: Bart Maat/ANP Read more at DutchNews.nl:
Xukuumadda Raiisel wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa gudbisay is casilaadeeda sababo la xiriira fadeexad maamul, sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee Holland.
Maalmo ka hor, waxaa jiray hadal hayn ku saabsan iscasilaadda xukuumadda Raiisel wasaare Mark Rutte ka dib fadeexad la xiriirta baaritaannada ku saabsan lacag bixinta daryeelka carruurta oo si khaldan ugu tilmaamtay kumanaan waalid inay yihiin “khaa’imiin”.
Nederland waxay qabataa doorashadeeda guud 17-ka Maarso.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, dowladda Mark Rutte ayaa si kumeelgaar ah xukunka usii heyn doonta illaa inta laga sameynayo isbahaysi cusub doorashooyinka kadib.
Nederland waa wadankii seddexaad ee yurub ah ee isbuucaan ku jira xaalad hubanti la’aan siyaasadeed toddobaadkan dhexdeeda dhibaatada Corona virus iyo saameynteeda, Estonia, Raiisel wasaaraha Gori Ratas wuxuu ku dhawaaqay iscasilaadiisa Arbacada, kadib markii xisbiga dhexe ee xukuma lagu sameeyay baaritaan la xiriira musuqmaasuq la xiriira shirkad guryaha dhista.
Dhanka kale, dowladda ra’iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte waxay halis ugu jirtaa inay burburto ka dib markii ra’iisul wasaarihii hore ee talyaaniga Matteo Renzi uu Arbacadii sheegay inuu la baxayo wasiirada xisbigiisa ee ka tirsan dowladda, taasoo ka dhigeysa isbahaysiga xukumaya aqlabiyadda Barlamaanka.